Omkhulu uGeneral Winfield uScott Hancock - I-Biography
UWinfield Scott Hancock - Ubomi bokuqala kunye noMsebenzi:
UWinfield Scott Hancock kunye newele lakhe elifanayo, u-Hilary Baker Hancock, bazalwa ngoFebhuwari 14, 1824 eMontgomery Square, PA, ngasenyakatho-ntshona yeFiladelphia. Unyana we-titshala we sikolo, kunye nommeli kamva, uBenjamin Franklin Hancock, wabizwa ngokuba ngu- War of 1812 umphathi weWinfield Scott . Efundiswa kwendawo, uHancock wathola isigxina kwi-West Point ngo-1840 ngoncedo lweCongressman Joseph Fornance.
Umfundi ohamba ngezinyawo, u-Hancock waphumelela ngo-1844 waba ngu-18 kwiklasi yama-25. Ukusebenza kwezemfundo kwamnika isabelo kwi-infantry kwaye wayethunyelwa njenge-brevet ye-lieutenant yesibini.
UWinfield Scott Hancock - eMexico:
Walawulwa ukuba ujoyine i-Infantry ye-6 yase-US, uHancock wabona umsebenzi kuMlambo oyiRed Red. Ngokuqhambuka kweMfazwe yaseMexico naseMelika ngo-1846, wathola imiyalelo yokujonganisa imizamo yokuqesha eKentucky. Ukufezekisa ngempumelelo isabelo sakhe, waqhubeka ecela imvume yokujoyina iyunithi yakhe ngaphambili. Oku kwavunyelwa kwaye waphinda wajoyina i-Infantry yesi-6 e-Puebla, eMexico ngoJulayi 1847. Ukukhangela njengenxalenye yomkhosi wakhe, uHancock wabona kuqala ukulwa e- Contreras naseChurubusco ekupheleni kuka-Agasti. Ukuzihlukanisa ngokwakhe, wafumana ukuphakanyiswa kwe-brevet ku-lieutenant wokuqala.
Walimala emadolweni ngethuba lokugqibela, wakwazi ukukhokela amadoda akhe ngexesha leMfazwe yaseMolino del Rey ngoSeptemba 8 kodwa kungekudala wahlulwa ngumkhuhlane.
Oku kuye kwamthintela ukuba athathe inxaxheba kwi- Battle of Chapultepec aze athabathe iSixeko saseMexico. Ukubuyisela, uHancock wahlala eMexico kunye nolawulo lwakhe kwaze kwasayinwa iSivumelwano saseGuadalupe Hidalgo ekuqaleni kwawo-1848. Ekupheleni kwengxabano, uHancock wabuyela eUnited States waza wabona umsebenzi wexesha loxolo e-Fort Snelling, MN naseSt.
Louis, MO. Ngoxa wayeseSt. Louis, wadibana waza watshata noAlmira Russell (mJanuwari 24, 1850).
Winfield Scott Hancock - Isevisi yeAntebellum:
Wakhuthazwa ukuba abe ngumphathi ngo-1855, wafumana imiyalelo yokukhonza njengomphathi wekota kwi-Fort Myers, FL. Kulo nxaxheba wayexhasa izenzo ze-US Army ngexesha leMfazwe yesiThathu ye-Seminole, kodwa akazange athathe inxaxheba ekulwa. Njengoko umsebenzi wonakaliswa eFlorida, uHancock wadluliselwa e-Fort Leavenworth, KS apho wancedisa ekulwa nokulwa kwintsebenziswano ngexesha le-"Bleeding Kansas". Emva kwexesha elifutshane e-Utah, uHancock wayala ukuya enyakatho yeKalifornia ngoNovemba 1858. Ukufika apho, wayekhonza njengomsizi wekota kwikota ye-Confederate Commander- General uGrigadier General Albert Sidney Johnston .
UWinfield Scott Hancock - Imfazwe Yomphakathi:
I-Democrat eyaziwayo, uHancock wahlala kunye namagosa amaninzi aseMelika ngelixa e-California, kuquka uCaptain Lewis A. Armistead waseVirginia. Nangona engazange axhase imigaqo-nkqubo yeRiphabhlikhi kaMongameli u-Abraham Lincoln osandula ukhethwa, uHancock wahlala kunye ne-Union Army ekuqaleni kweMfazwe yombutho njengoko wayecinga ukuba uManyano kufuneka agcinwe. Ukunikezelwa kwebhanki kubahlobo bakhe basezantsi njengoko behamba ukujoyina i-Confederate Army, uHanck wahamba empuma kwaye ekuqaleni wanikezwa umsebenzi we-quartermaster eWashington, DC.
UWinfield Scott Hancock - Inkwenkwezi Ephakamileyo:
Esi sabelo sasidlulileyo njengoko wayekhuthazwa ukuba abe ngu-brigadier jikelele wamavolontiya ngoSeptemba 23, 1861. Wabelwa kwi-Army yase Potomac, wathola umyalelo wegqeba e- Brigadier General William F. "Bally" Smith . Ukufudukela eningizimu entwasahlobo ka-1862, uHancock wabona inkonzo ngexesha leGeneral General George B. McClellan 's Peninsula Campaign. Umlawuli onobudlova kunye nosebenzayo, uHancock wanikezela ngokuchasana okubalulekileyo ngexesha leMfazwe yaseWilliams ngoMeyi 5. Nangona uMcClellan engaphumeleli ukuphumelela kwimpumelelo kaHancock, umlawuli we-Union watshela iWashington ukuba "uHancock wayenomhla namhlanje."
Eyithathwe ngu-press, le ngqungquthela yenze uHancock igama lakhe lomnxeba ngokuthi "Hancock Superb." Emva kokuthatha inxaxheba kwiManyano kwiNtsuku yeeNtsuku ezisixhenxe, iHancock yabona isenzo kwi- Battle of Antietam ngoSeptemba 17.
Ukuphoqelelwa ukuthatha umyalelo wecandelo emva kokulimala uMninimandla-Jikelele wama-Israel uBrazil Richardson, wayejongene neminye yemfazwe kunye ne "Bloody Lane". Nangona amadoda akhe enqwenela ukuhlasela, uHancock wabamba isikhundla sakhe ngenxa yemiyalelo evela kuMcClellan. Ukukhuthazwa kuba ngumbutho omkhulu ngoNovemba 29, wahola uLawulo loQala, ii-II Corps ngokumelene neMarye's Heights kwi- Battle of Fredericksburg .
UWinfield Scott Hancock - E-Gettysburg:
Ngentwasahlobo elandelayo, isahlulo sikaHancock sinceda ukukhupha umxhelo wempi emva kokuba uMongameli Jikelele uJoseph Hooker etshiswe kwiMfazwe yaseCancellorsville . Ekuvukeni kwemfazwe, umphathi we-II Corps, uMongameli Jikelele weDarius Couch, washiya umkhosi ngokubhikisha kwezenzo zikaHooker. Ngenxa yoko, uHancock waphakanyiswa ukuba akhokhe i-II Corps ngoMeyi 22, 1863. Ukunyuka ngasemntla nomkhosi ekuphishekeleni i- General Robert E. Lee yaseNyakatho Virginia, uHancock wabizwa ngokusebenza ngoJulayi 1 ngokuvula Imfazwe yaseGettysburg .
Xa uMninimandla Jikelele uJohn Reynolds wabulawa ngethuba lokulwa, umlawuli omtsha uMajenenkulu uGeorge G. Meade wathumela uHancock phambili ukuya eGeedtysburg ukuba athathe umyalelo wemeko entsimini. Ukufika, wathatha ulawulo lweManyano yamanyano emva kokukhawulelana okufutshane kunye noMongameli Jikelele u-Oliver O. Howard . Ukuqinisekisa imiyalelo yakhe evela kuMeade, wenza isigqibo sokulwa e-Gettysburg kwaye waqulunqa izikhuselo zeManyano kwiMangcwaba Hill. Ukuxhaswa nguMeade ngaloobo busuku, uHancock II II Corps wayeyifumene kwiCemetery Ridge ephakathi kwendawo yomanyano.
Ngomso olandelayo, kunye neentlambo zombini zombutho phantsi kohlaselo, uHancock wathumela ii-ii Corps iiyunithi zokunceda ekukhuseleni. Ngomhla ka-Julayi 3, isikhundla sikaHancock sasijolise kwiNtlawulo ye-Pickett (Ukuhlaselwa kwe-Longstreet). Ngethuba lokuhlaselwa kweebhamu ezaphambi kohlaselo lweConstederate, uHancock wahamba ngeendlela zakhe ezikhuthaza amadoda akhe. Ekuhambeni kokuhlaselwa okulandelayo, uHancock walimala emthonjeni kunye nomhlobo wakhe omhle uLee Armistead walimala ngokufa xa igosa lakhe libuyiselwa ngu-II Corps. Ukuxhaphaza isilonda, uHancock wahlala ensimini yonke impi.
Winfield Scott Hancock - Kamva iMfazwe:
Nangona ubukhulu becala kubuyiselwa ebusika, isilonda saye sammangalela ngenxa yentsholongwane. Ukubuyela kwi-Army yasePomomac entwasahlobo ka-1864, wathatha inxaxheba kwiLieutenant General Ulysses S. Grant kwi- Wilderness ye- Overland Campaign ebona isenzo eWilderness , eSpotsylvania naseCold Harbour . Ukufika ePetersburg ngoJuni, uHancock waphelelwa ithuba lokuthatha loo mzi xa echazwa "uBaldy" Smith, amadoda akhe ayelwa naloo ndawo yonke imini, kwaye akazange ahlasele ngokukhawuleza imigca yeCompederate.
Ngexesha lokungqingwa kwePetersburg , amadoda kaHancock athatha inxaxheba kwimisebenzi embalwa kuquka ukulwa kwi-Deep Bottom ngasekupheleni kukaJulayi. Ngomhla ka-Agasti 25, wabethwa kakubi kwisikhululo sikaReam, kodwa wabuyiselwa ukuphumelela i- Battle of Boydton Plank Road ngo-Oktobha. Ehlwaywe ngumonakalo wakhe we-Gettysburg, uHancock waphoqeleka ukuba akhiphe umyalelo wentsimi kwinyanga elandelayo kwaye wadlulela kwiinkalo zemihla yokugubha, yokuqashwa, kunye nezolawulo eziseleyo kwimfazwe.
UWinfield Scott Hancock - Umviwa kaMongameli:
Emva kokunyamekela ukubulawa kwabakhohlisi bakaLincoln ngoJulayi 1865, uHancock wachaza ngokufutshane i-US Army kwiiNxweme ngaphambi kokuba uMongameli uAndrew Johnson amenze aqondise umsebenzi wokwakhiwa kwakhona kwiSithili se-5. Njengomdemokhrasi, walandela umgca ogqithiseleyo ngokubhekiselele kuMzantsi kunokuba abalingani bakhe beRiphabhliki bephakamisa isimo sakhe kwiphathi. Ngolonyulo lweGrant (iRiphabhlikhi) ngowe-1868, uHancock wathuthela kwiSebe laseDakota kunye neSebe le-Atlantiki ngenzame yokumgxotha eMzantsi. Ngo-1880, uHancock wakhethwa ngabaDemokhrasi ukuba baqhubele umongameli. Ukuqhekeza u-James A. Garfield, walahleka kakhulu kunye nevoti ethandwayo kuba ngowona mlando (4,454,416-4,444,952). Emva kokutshatyalaliswa, wabuyela emkhosini wakhe. UHancock washona eNew York ngoFebruwari 9, 1886 waza wangcwatywa eMangcwabeni eMontgomery kufuphi naseNorristown, PA.
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uAlexander Hayes
I-Movie Version ye "Ukubulala i-Mockingbird"
Imirhumo yehlabathi kwiRuby
UmThetho wokuKhutshwa kweShayina
Dweba iIhhashi yeeNyathelo inyathelo ngesinyathelo